UGabriela Mistral. 2 izinkondlo ngesikhumbuzo sokufa kwakhe | Izincwadi Zamanje
UGabriela Mistral. 2 izinkondlo ngesikhumbuzo sokufa kwakhe
Gabriela Mistral, imbongi eyaziwa kakhulu eChile futhi Umklomelo kaNobel Ezincwadini e 1945, ushonile usuku olufana nanamuhla lwe 1957 ENew York. Uzibophezele hhayi emsebenzini wakhe kuphela, kepha nasemsebenzini wakhe wezenhlalakahle njengo ukusabalala kwesiko nokwakhe silwele ubulungiswa kwezenhlalo namalungelo abantu. Enkumbulweni yakhe ngikhumbula izinkondlo zakhe ezimbili, Besos y Owesifazane onamandla.
2 Izinkondlo eziyi-2
2.1 Owesifazane onamandla
Su igama langempela inkathi ULucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, kodwa wayaziwa ngegama lakhe, elalikhuthaza umsebenzi we Gabriel UD'Annunzio noFréderic I-Mistral.
Fue uthisha wasemakhaya futhi usebenzisana ezincwadini zemibhalo kanye nezabo imibhalo yokuqala zavela ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ezincwadini zasendaweni. Wabhalela nawo lo magazini Ubuhle, ngubani owaqondisa URubén Darío. Kungaleso sikhathi lapho i- Umklomelo Kazwelonke Wezinkondlo waseChile.
I-Mistral wadabula amazwe amaningi afana IMexico, i-United States, iSwitzerland, i-Italy noma iSpain, lapho ayengummeli weChile eMadrid ekuqaleni kwawo-30. Leyo nkathi njengenxusa izomyisa ePortugal, eFrance noma eBrazil, phakathi kwezinye izindawo. Umsebenzi wakhe uhunyushelwe ku izilimi ezingaphezu kwekhulu. Ezinye iziqu zinjalo Incithakalo, Ukufundela abesifazane, Ubumnene, Amanoni wokufa nezinye izinkondlo ze-elegiac, Tala o I-Lagar.
Ngikhumbula ubuso bakho obabumiswe ezinsukwini zami,
owesifazane onesiketi esiluhlaza okwesibhakabhaka nebunzi elithosiwe,
ukuthi ebuntwaneni bami nasezweni lami le-ambrosia
Ngabona umsele omnyama uvuleka ngomlilo ka-Ephreli.
Ukhulise ethaveni, ejulile, inkomishi engcolile
lowo onamathisele indodana esifubeni somnduze,
futhi ngaphansi kwaleyo nkumbulo, ukuthi bekuwukushiswa kuwe,
imbewu iwele esandleni sakho, iqinile.
Ukuvuna ngibone ukolweni wendodana yakho ngoJanuwari,
futhi ngaphandle kokuqonda ngangibheke kuwe,
kukhuliselwe laba babili, ngokumangala nokukhala.
Futhi udaka olusezinyaweni zakho lusazoqabula
ngoba angibutholanga ubuso bakho phakathi kwemigwaqo eyikhulu
Futhi ngisakulandela emiseleni isithunzi ngengoma yami!
Kukhona ukuqabula abakusho bodwa
isigwebo sothando esilahlayo,
kukhona ukwanga okunikezwa ngokubukeka
kukhona ukwanga okunikezwa ngememori.
Kukhona ukuqabula buthule, ukuqabula okuhle
kukhona ukwanga okuyindida, okuqotho
kukhona ukwanga okunikana imiphefumulo kuphela
kukhona ukwanga okunqatshelwe, kuyiqiniso.
Kukhona ukwanga okushisayo nokulimazayo,
kukhona ukwanga okususa izinzwa,
kukhona ukwanga okuyimfihlakalo okushiyiwe
izinkulungwane ezizulazulayo futhi ezilahlekile amaphupho.
Kukhona ukuqabula okunenkinga okuvalekile
ukhiye okungekho noyedwa oye wawuqonda,
kukhona ukwanga okubangela usizi
mangaki ama-brooch roses asepholise igama.
Kukhona ukwanga okunephunga elimnandi, ukwanga okufudumele
lokho kuthanda ukufisa okusondelene,
kukhona ukwanga okushiya imikhondo ezindebeni
njengensimu yelanga phakathi kwamaqhwa amabili.
Kukhona ukwanga okufana neminduze
kokuzithoba, ukungazi lutho nokuhlanzeka,
kukhona ukwanga okukhohlisayo nobugwala,
kukhona ukuqabula okuqalekisiwe nokwamanga.
UJuda uqabula uJesu bese eshiya okubhaliwe
ebusweni bakhe uNkulunkulu, isigebengu,
ngenkathi uMagdalena ngokumanga kwakhe
piously ukuqinisa usizi lwakhe.
Kusukela lapho ekuqabuleni kuyashaya
uthando, ukukhaphela nobuhlungu,
emishadweni yabantu babukeka befana
kumoyana odlala nezimbali.
Kukhona ukwanga okukhiqiza imihosha
ngothando oluvuthayo nolunobuhlanya,
ubazi kahle, bangiqabulo lami
yasungulwa yimi, ngomlomo wakho.
ULlama uqabula lokho ngokulandelwa okuphrintiwe
baphatha imisele yothando olungavunyelwe,
ukwanga kwesiphepho, ukwanga kwasendle
ukuthi kuphela izindebe zethu ezinambithile.
Uyasikhumbula esokuqala ...? Okungachazeki;
imboze ubuso bakho ngamahlumela acwebezelayo
nasezinhlakalweni zemizwa esabekayo,
amehlo akho agcwele izinyembezi.
Uyakhumbula ukuthi ngolunye usuku ntambama ngokweqile ngokweqile
Ngikubonile unomona ucabanga izikhalazo,
Ngikumisile ezingalweni zami ... ukuqabula kudlidlizile,
futhi uboneni emva ...? Igazi ezindebeni zami.
Ngikufundise ukuqabula: ukwanga okubandayo
bangabantu benhliziyo yedwala elingadluli,
Ngikufundise ukuqabula ngokwanga kwami
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UGabriela Mistral. 2 izinkondlo ngesikhumbuzo sokufa kwakhe
Ngabe izizukulwane ezintsha zifunde kancane?
Impilo nomsebenzi kaMiguel Hernández